အနုပညာလောကထဲ စ၀င်ခါစတုန်းက ပုံလေးတွေကို Video လေးနဲ့ ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ သက်မွန်မြင့် - Myannewsmedia
အနုပညာလောကထဲ စ၀င်ခါစတုန်းက ပုံလေးတွေကို Video လေးနဲ့ ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ သက်မွန်မြင့်
နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ မင်းသမီး သက်မွန်မြင့်ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ မင်းသမီးလေးတစ်ဦးပါ။ သူမက အနုပညာကို ကြိုးစားလုပ်ရင်း ချစ်ရတဲ့ မိသားစုလေးနဲ့ ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်တွေအတွက် သရုပ်ဆောင် သက်မွန်မြင့် က သူမ အနုပညာစလုပ်ခါစ ပုံရိပ်ကလေးတွေကို Video File လေးနဲ့ အတူ မျှဝေလိုက်တဲ့ အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
သက်မွန်မြင့် က ခုဆိုရင် သူမလျှောက်လှမ်းလာတဲ့ အနုပညာသက်တမ်း နှစ်၂၀ ပြည့်သွားပါပြီ ။ အနုပညာ သက်တမ်း ၂၀ ပြည့်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့လည်း သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေ၊ ချစ်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းများနဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ပွဲလေးတစ်ခုကိုလည်း ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
လတ်တလော သူမရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှု ကတော့ သရုပ်ဆောင် မြင့်မြတ် ၊ ခြူးလေး တို့နဲ့အတူ ” ကဝေသေလို့ ခြောက်တဲ့ တစ္ဆေ ” ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ သက်မွန်မြင့် က သူမ အနုပညာ စလုပ်ခါစတုန်းက ပုံလေးတွေနဲ့ လက်ရှိ သူမရဲ့ ပုံလေးတွေကို Video File လေးလုပ်ပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ သက်မွန် က ” အိပ်မပျော်သေးလို့ဆိုပြီး ပုံတွေရှင်းဖို့ကြည့်ရင်းး ကိုယ့်ပွဲလေးတုန်းက အမှတ်တရတွေတောင် မတင်ရသေးတာပဲ!
????များလွန်းလို့ ဘယ်ကတင်ရမှန်းမသိပဲ ရပ်ရပ်သွားတာ????????????ဒါလေးကတော့ ပွဲမှာ အသုံးပြုခဲ့တာလေးပေါ့. ငယ်တုန်းက အလှနဲ့ ကြီးအလှ ယှဉ်ပေးထားလေတော့ ” ဆိုပြီး ပြောထားပါသေးတယ်။
အနုပညာ စလုပ်ခါစ တုန်းက သက်မွန်မြင့် ရဲ့ ပုံရိပ်လေး
အနုပညာစလုပ်ခါစ ပုံလေးတွေကို Video လေးနဲ့ ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ သက်မွန်မြင့်
သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ သက်မွန်မြင့်ရဲ့ ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ပရိသတ်တွေ သဘောကျကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးကလည်း သက်မွန်မြင့်ရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးနော်။ ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။
Previous post သင့်ကို ကိုယ်အလေးအချိန် မကျအောင် တားဆီးနေတဲ့ နေ့စဉ်အပြုအမူ ၅ မျိုး
Next post နေပြည်တော်မှ သက်ငယ်မုဒိန်းမှု အမှုမှန်ပေါ်ဖို့ ရပ်တည်သွားမယ်လို့ဆိုတဲ့ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေ